Qalab Fudud Oo Fashilaaya Dhinta Bacriminta Qalabka Qalabka Mashiinka iyo Warshadda | YiZheng
Muxuu yahay Mashiinka Gawaarida Fudud ee Bacriminta
Mashiinka Gawaarida Gawaarida Nalalka ah waxaa loogu talagalay nooc iyo taxane kala duwan. Mashiinka granulator ee dhinta flat wuxuu adeegsadaa foomka gudbinta tooska ah ee hagitaanka, kaasoo ka dhigaya rullaluistemadka is-beddelka hoosta ficilka xoogga khilaafsan. Waxyaabaha budada ah ayaa laga soo saaraa daloolka saxafadda caaryada ee rullaluistemadka, iyo walxaha jilicsan ayaa ka soo baxa maqaarka. Mashiinka Gawaarida Gawaarida Nalalka ah waa qalab muhiim u ah warshadaha bacriminta, waxay ku habboon tahay wax soo saar ballaaran.
Waa maxay Flat Die Bacriminta Extrusion Granulator Mashiinka loo isticmaalo?
Mashiinka Gawaarida Gawaarida Nalalka ah waa in loo qaabeeyaa loona istcimaalaa nooc khad soosaarka bacriminta noocyo kala duwan ah. Waqtiga intiisa badan, waa in loo qaabeeyaa loona istcimaalaa bacriminta dabiiciga ah iyo khadka soo saarista bacriminta isku dhafan. Waxaan nahay sida soosaarayaasha mashiinka bacriminta xirfadleyda ah, kaliya ma bixinayno mashiinka hal bacrimiye mashiinka keliya, laakiin sidoo kale waxaan u qorsheyn karnaa khadka soo-saarka bacriminta ee macaamiisha kala duwan. In line-soo-saarka bacriminta, waa in lagu qalabeeyaa mashiinka granulator bacriminta oo leh mashiinka granulator-ka dhinta iyo mashiinka qaabeynta kubbadda si ay uga dhigto granulator bacriminta qaab kubbadeed.
Inta lagu guda jiro qalliinka, maaddooyinka waxaa lagu tuujiyaa gunta hoose ee rullaluistemadka, ka dibna waa la gooyaa xoqeyaha, ka dibna loo marinayaa labada marxaladood ee isku dhafan ee isku dhafan, iyagoo ku rogaya kubbadda. KuMashiinka Gawaarida Gawaarida Nalalka ah wuxuu leeyahay faa iidooyinka heerka uumucda sare ee sameynta, majiro wax soo noqda, xoog granule sare, wareeg isku mid ah, qoyaanka granuleerka hooseeya iyo isticmaalka tamarta qalajinta yar.
Astaamaha Mashiinka Qalabaynta Fududeynta Bacriminta Dhimatay
1. Mashiinkaan waxaa badanaa loo isticmaalaa farsamaynta granule ee bacriminta noolaha iyo warshadaha ka shaqeynta quudinta.
2. Dhagxaanta ay farsamaysay Mashiinka Gawaarida Gawaarida Nalalka ah leeyihiin dusha siman oo nadiif ah, qalbi engegnaan dhexdhexaad ah, heer kulka oo hooseeya inta hawshu socoto, oo si wanaagsan u hayn kara nafaqooyinka alaabta ceeriin.
3. Guruubyo labis ah, dhexroorka granules waxaa loo qaybin karaa: Φ 2, Φ 2.5, Φ3.5, Φ 4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, iwm.
4. Waxyaabaha qoyaanka Granule waa hooseeya oo ku habboon keydinta iyo gaadiidka, sidaa darteed waxay si weyn u horumarisay heerka isticmaalka maaddada.
Astaamaha Mashiinka Qalabka Fududeynta Bacriminta Flat Die
►Waxyaabaha la dhammeeyay ee granule cylindrical.
►Waxyaabaha dabiiciga ah waxay noqon karaan ilaa 100%, samee granulo organic dabiici ah
►Isticmaalka granule maaddada dabiici ah oo leh mosaic wadaag isla markaana ka weynaanaya xoog gaar ah, looma baahna in lagu daro dhajiska marka la xoqaayo.
►Iyada oo granule wax soo saarka waara, waxay si toos ah u xoqin kartaa granulation ka dib si loo yareeyo isticmaalka tamarta qalajinta
►Ka dib markii uraha halsano uma baahna inuu qalalo, qoyaanka alaabta ceeriin waxay noqon kartaa 20% -40%.
Flat Die Bacriminta Extrusion Granulator Mashiinka Muuqaalka Muuqaalka
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Flat Die
Soosaarka (t / h)
Heerka kala-soocidda (%)
Heerkulka granule oo kor u kaca (℃)
Hore: Nooca Cusub ee Mashiinka Granulator Bacriminta Nadiifiyaha & Xarunta
Xiga: Double Ku marooji Extruding Granulator